musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » WTTC inopindura kurudziro dzazvino kubva kuEU
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Technology • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
wttc yakachengeteka inofamba chitambi
Vashumiri uye vekunze vanoita zvisarudzo munzvimbo yeruzhinji vanoshandura zvinorambidzwa zvekufamba zuva nezuva. Kushaikwa kwekushandira pamwe kwepasirese uye kushomeka kwenzvimbo yepasirese kunoita kuti nyika dzese dzive chinetso, kunyangwe kune vakabaiwa majekiseni.
Sezvakaitwa neWTTC zvisati zvaitika, sangano rinomiririra nhengo hombe dzeindasitiri yekufambisa neyekushanya nhasi yaita chimwe chirevo uye chishuwo.
Kana chirevo ichi chichibatsira kuunza chero chiito chinomirira kuti chionekwe.
Julia Simpson, Mutungamiri & CEO weWorld Travel and Tourism Council (WTTC) vakaburitsa chirevo vachiti:
Nekudaro, kurudziro yeEU yekumisazve zvirambidzo kune vafambi veUS idanho rekudzokera shure uye inongodzora kudzoka kwechikamu.
“Nechihomba chekudzivirira majekiseni muUS neEU, tinofanirwa kunge tichitarisa kuvhura kufamba pakati pehupfumi hukuru uhu.
WTTC CEO akawedzera kuti:
Isu tinoda seti yakajairika yemitemo inoziva majekiseni epasi rose uye kubvisa kudiwa kwekuisa wega kune vanhu vane yakaipa COVID mhedzisiro.
"US musika wakakoshesa nyika zhinji dzeEU, dzakaita seFrance, Italy, Germany, neIreland, uye kushanya kuchave kwakakosha mukudzorera hupenyu hwakajairika nemakumi ezviuru emabasa muUS neEU.
"Panzvimbo pekumisikidza zvimwe zvinokanganisa kufamba, EU inofanirwa kukurudzira Nhengo dzeNyika kuti dzishandise Dhijitari yayo yeCVVID Chitupa kudzosera zvakachengeteka mafambiro epasi rose, akakosha kuhupfumi hweEurope."
The European Union mazuva matatu anoenda akamisa kufamba kwakakosha kune vashanyi veAmerica nekuda kwespike mune itsva COVID-19 hutachiona muUnited States.
Portugal, nhengo yeEU nhasi yabva pamitemo yeEU ichizivisa kuti ichiri kutambira vashanyi veAmerica.
Portugal inoramba yakavhurika vafambi veUS kunyangwe ichipihwa kuraira kweEU
Moscow Red Square yakavharwa mushure merusvingo rweKremlin ...
Bryce Baker anoti:
Svondo 2, 2021 pa 13: 32
izwi rakashaikwa raive "RINOGONESEDZWA" iro rakabviswa kubva pane zvandataura.
Svondo 2, 2021 pa 13: 30
Ndokumbirawo uve wakarurama muzvinyorwa zvako… .wakasiya izwi rakakosha muchirevo ichi - chakanyorwa mumabhureki:
"European Union mazuva matatu yakamiswa kufamba kwese kwakakosha kune vashanyi vekuAmerican nekuda kweshuga yehutachiona hutsva hwe COVID-19 muUnited States."
Unoita zvisizvo nekusataura mushe chaizvo.